Yenza eyethu usetyenziso lweselfowuni- iGeofumadas
Yenza eyethu usetyenziso lweselfowuni
NgoJanuwari, 2012 ezintsha, Internet kunye neBlogs, egeomates My
Umjelo sisinye sezona zisombululo zibalaseleyo ngaphandle zokwakha usetyenziso lweselfowuni. Ubhetyebhetye obunayo, eyongezwe kwinani lamaqonga axhaswayo abonakalisa umsebenzi omangalisayo wabadali bayo apho ibhlog, i-rss feed okanye umxholo wemidiya yoluntu ungathathwa kwizicelo ezilungele ukuhanjiswa kwiivenkile zesicelo ezinje ngeeVenkile okanye iiVenkile ze-Android. .
Ngaloo nto, nabani na ngaphandle kokuba ngumlimi weprogram yomnxeba bangahlakulela isixhobo esisebenzayo, ngokuyinhloko kwimixholo kwi-Intanethi; nangona ivumela ukuba kudibaniswe uphuhliso oluthile kuba lukhona i-API enokuba yinto elula kunokuba iqoke iikhati kunye nekhowudi ukususela ekuqaleni.
Kunokwenzeka ukudibanisa idatha esuka kwimithombo eyahlukeneyo, kunye namaqhosha alula adibeneyo afana ne-rss, i-YouTube, iMaphu, umculo okanye imifanekiso.
Ukongezelela ixhasa isiqulatho se-html kwaye idityaniswe kwiinkqubo eziqhelekileyo ezifana nokuqhagamshelana kunye ne-imeyile.
Hlanganisa umxholo odibeneyo
Ngalokhu, ibhulogi inokuyithathwa kwisicelo seselula ngokubandakanya idilesi ye-rss; kwaye kungekhona kuphela loo nto kodwa kunye nezinye iimfesane.
Njengesampulu ndikunika umzekelo endiwuphuhlisileyo ukusuka kwiGeofumadas, kule, ukubona ukuba ijongeka kanjani kwi-iPad: Jonga ukuba ukubonakala kokulandela umkhondo wesondlo kuyasebenza.
Amaqhosha okufikelela anokutshintshwa ngokulandelelana, nangona iqonga lilahlekile kwezinye izinto endicinga ukuba ziya kudityaniswa kamva, ezinje ngeqhosha lokubuya kuba xa ucofa ujongo kumbono wendlela yesikhangeli, ayibandakanyi i icon ukubuyela kwisicelo esiphathwayo. ; Oku kuyenzeka xa igcinwa njengendlela emfutshane kwidesktop ye-iPad, eqala i-Safari ngaphandle kwemenyu. Ukhuphelo lwenguqulo ye-Android ngamanye amaxesha ihlala ilindile, nangona yakuba ifakiwe akukho ngxaki.
Ukudibanisa umxholo kumanethiwekhi asekuhlaleni
Kwakweso sicelo sinye iqhosha linokufakwa ukubonisa ukuhamba kwephepha le-Facebook, iakhawunti ye-Twitter okanye igama esililandelayo. Umzekelo olandelayo uvela kwiakhawunti yeGeofumadas, ukuyijonga njengesicelo se-Android.
Ngale ndlela, emva koko umlandeli othembekileyo unokucofa indawo enye, kunye nonxibelelwano lwenethiwekhi. Umsebenzi ngamnye unonqakrazo olufikelelekayo ukwabelana ngomxholo. Masingatsho ukuba iividiyo ze-Youtube ezinxulumene nomxholo zidityanisiwe.
Emva kokuba usichazile imithombo yedatha, unokhetha iipropati zokuthunyelwa, njenge-icon yesicelo, isitayela semvelaphi, ipilisi yeelwimi kunye nombala.
Ngokwendlela yokuhamba, ungakhetha apho ibar yokukhangela iya khona, ezantsi, phezulu, kwiibhloko ezime nkqo okanye kumaqhosha athayile. Umjelo unenkonzo elungileyo yokujonga kwangaphambili ngokuthe nkqo nangokuthe tye, ukuze uyazi ukuba izakujongeka njani kumaqonga ahlukeneyo axhaswayo:
Ingabonakala nakwizinga lewebhu.
CIndlela yokusasaza isicelo
Emva kokudalwa, i-Conduit ineendlela eziliqela zokusasaza isicelo, eyona njongo yokugqibela yalabo abayidalayo:
Enye indlela kukuhambisa iindwendwe zakho. Kukho ukusebenza, apho iskripthi senziwe ukukopa ikhowudi yesiza, ngalo lonke ixesha undwendwe lufika lusuka kwiselfowuni, kuphakanyiswa isilumkiso sokulumkisa ukuba kukho uguqulelo lweselfowuni kwaye lumnike ithuba lokukhetha indlela yokuyijonga.
Omnye uphakanyiswa kwiintanethi (i-Twitter okanye i-Facebook), kuba kukho iikhomputha ezikhethekileyo phantsi kwepaneli yesicelo.
Ikwazisa kwakhona ukusebenza kokudala ikhowudi ye-QR, engayifakwa kwisayithi ukuze iyifake ikhamera yeselula.
Kwaye okokugqibela, kukho ukhetho lokuyilayisha kwiivenkile zesicelo. Umjelo unenkqubo ephuhliswe kakuhle, ukufaka idatha yesicelo, imifanekiso njengoko kufunwa ziivenkile zeewindows, ukhetho lwamazwe apho zinokujongwa khona, kunye nenketho yokuvelisa usetyenziso lokukhuphela. Ewe kunjalo, oku kufuna ukuhlawulwa kwiivenkile ezahlukeneyo, kwimeko ye-Android ubhatala i-US $ 25 yobhaliso, kwiWindows Mobile iUS $ 99 kwaye kwiApple uhlawula iUS $ 100 ngonyaka; Ewe unokuseta ixabiso lokukhuphela, oku akwenziwa kwiConduit kodwa kwivenkile.
Emva kokulayishwa, ukuhlaziywa kwenziwa kwi-conduit kunye neqhosha elilodwa, ngaphandle kokuyilayisha kwakhona.
Inokusebenza okunomdla ukuthumela izaziso kwangoko kubasebenzisi abazikhupheleyo. Oku kungathunyelwa ngokubanzi kuye wonke umntu, ngokwelizwe okanye ngokukhetha indawo ethile kwimephu.
Ngokuqinisekileyo. enye yezona zinto zibalaseleyo endizibonileyo ndenza usetyenziso lweselfowuni ngaphandle kwamava njengenkqubo. Mayibe yinkonzo yasimahla, kungcono.
Kufanelekile ukuzama, kuba inezinto ezingaphezulu kwento endiyibonisayo kweli nqaku, umzekelo manani anomdla kakhulu kunye nenkqubo yentengiso. Isampulu ndiyakushiyela into endiyisebenzeleyo yeGeofumadas kwinguqulelo yeselfowuni ndisebenzisa uConduit:
Ukuthabatha i-Geofumadas ikhowudi ye-QR
Khuphela i-Geofumadas ye-Android
Hlola kuqala kwisikhangeli sesiphequluli
Post edlulileyo«Ngaphambilini Ukususela ekuvaleni kweMegaupload kunye nezinye iimpawu
Post Next Ulawulo lolwazi, umhlaba utshintshileOkulandelayo »
2 Ukuphendula "Yenza eyethu usetyenziso lweselfowuni"
Sitshintshele ngomfanekiso wakho
Omnye umbuzo, uyisusile njani isikrini? Andikwazi